War saxaafadeed: Wadahadllada Gaalkacyo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
1st December 2015 MAREEG Af Soomaali 0
Madaxweynaha Dowlad-Goboleedka Galmudug isaga oo xeerinaya nabad ku-wada noolaanshaha dadka walaalaha ah ee reer Gaalkacyo wuxuu 30/11/2015 amar ku bixiyey sii deynta 9 qof oo lagu qabtay dagaalladii ka dhacay magaalada Gaalkacyo intii u dhaxaysay 22-28kii Nofeembar 2015. Tilaabadaas oo ah mid loo qaaday dhanka nabadda ayaa muujinaysa sida ay Galmudug uga go’antahay xal-u-helidda xiisadda ka jirta magaalada Gaalkacyo. Dadkaan ayaa lasii daayey kadib markii ay Galmudug aqbashay codsigii Xukuumadda Federaalka markii labaad muddo saddex casho gudahood ah; 27kii Nofeember ayuu Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Cadaado tagey si uu Galmudug ugu qanciyo qaadshada qodobbo loo arkay in ay waan waanta gundhig u noqon-kareen.
Xukuumadda Galmudug iyada oo qadarinaysa wufuudda uu horkacayo R/wasaare Cumar C/rashiid iyo madaxda maamul-goboleedyada waxa ay si shuruud la’aan ah u aqbashay in xabbadda la joojiyo, lakala qaado ciidamada is hor fadhiya, lasoo magacaabo guddigii uga qayb-gali lahaa wadahadalka iyo in dadkii magaalada ka qaxay ay dib ugu soo laabtaan guryahooda.
Madaxweynaha Dowlad-Goboleedka Galmudug isagoo ka jawaabaya codsigii Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayuu tagey magaalada Gaalkacyo 29/11/2015 si loo sii ambaqaado waan-waantii baaqatay oo aan aaminsannahay in ay Puntland sababteeda lahayd.
Eedaymaha loo jeedinayo Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed waa kuwo aan sal iyo raad lahayn, lana doonayo in looga raad gato lahaanshaha masuuliyadda dagaalkii Gaalkacyo. Run ahaantii, xag- xagashada joogtada ah oo la xag-xaganayo hay’adaha qaranku maahan kuwo ku cusub dhagaha ummadda Soomaaliyeed iyo kuwa Galmudug, waxaanan u aragnaa eedaymaha noocana kuwo looga war-wareeganayo gogosha nabadda ee haatan fidsan.
Waxaa xusid mudan in xiisadda Gaalkacyo ka aloosan ay tahay mid u dhaxaysa labo maamul-goboleed: Galmudug iyo Puntland oo aysan ahyen mid leh wajiyo kale . Dadka doonaya in ay waji qabiil u yeelaan arrintan waa kuwo doonaya dano gurracan, kana soo horjeeda horumarka umadda Soomaaliyeed.
Gabagabadii, waxaan umadda Soomaaliyeed iyo beesha caalmka u caddeyneynaa in Galmudug ay marwalba u taagantahay nabadda iyo daris wanaagga, taana waxaa daliil u ah in Galmudug ay aqbashay dhammaan qodobadii ay soo jeediyeen odayaasha dhaqanka, R/wasaaraha iyo wufuudda Dowlad-goboleedyada, aanna ku tillaabsannay ficillo uur-fiyoobi iyo qalbi-sami leh.
Wixii Faah-faahin Dheeraad ah waxaad kala xiriiri kartaa:
Wasiirka Warfaafinta, Hanuuninta, Dhaqanka & Dalxiiska GalMudug